Biomass dị ka isi iyi nke ike Spanish | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Biomass dị ka isi iyi nke ike Spanish
Daniel Palomino | | Bayam, Noticias
The Old Continent ma ọ bụ, kpọmkwem mba ndị mejupụtara European Union nwere ọtụtụ ndọghachi azụ na otu n'ime ha bụ mkpa maka mmanụ na gas dị ka isi iyi ike.
Ruo ogologo oge, iji belata ntụkwasị obi dị otú ahụ na mmanụ ọkụ (nke akaụntụ maka 99% nke nbanye mbubata nke European Union), ọ raara onwe ya nye ume ọhụrụ, ịbụ ndị a dị ka anyị sirila mara, dị ọcha ma nwee nkwanye ùgwù karịa gburugburu ebe obibi.Obi uto nkezi ndabere ike nke European Union-27 (otu n'ime mpaghara mpaghara mpaghara ume ala kachasị dị ala) enweghị ihe ọzọ 53,4% ​​n'ime 2014. Omume na-aga n'ihu na-abawanye kwa afọ site na nnukwu usoro.
La Biotù European Biomass Association, nke akpọbiri aha ya bụ AEBIOM, emeela nchọpụta nke gosiri na Europe n’ozuzu nwere ike afọ ojuju ruo ụbọchị 66 n’afọ naanị na ume ọhụrụ.
N'ime ụbọchị 66 ndị a, 41 nwere ike ịnwe naanị onwe ya site na biomass, nke a pụtara, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ abụọ n'ụzọ atọ ya.
Ọ bụ n'ihi nke a ka Javier Díaz, onye isi oche nke AVEBIOM, ya bụ, Spanish Association for Energy Recovery, na-ahụ na:
“Bioenergy bụ ihe kachasị mkpa isi nweta ume na Europe. Ọ dịlarị nso karịa inye ọkụ ka ọ bụrụ nke mbụ nwere ike inye ike ”.
1 Na ọnọdụ mbụ, Sweden
2 Ọganihu nke biomass na Spain
Na ọnọdụ mbụ, Sweden
N'ihe banyere inwe naanị España, ọnụ ọgụgụ nke ụbọchị 41 dị ntakịrị, ọ bụ ezie na biomass mepụtara nwere ike ikpuchi ọchịchọ nke ụfọdụ Ụbọchị 28, nke ahụ bụ, nhata nke ọnwa na-enweghị ngwụcha nke February.
Mba anyị na European nọ n'ọkwá dị elu nọmba 23, dị ka Belgium.
Onye Nduzi nke AVEBIOM Projects, Jorge Herrero na-egosi na:
"Anyị ka dị anya site na mba ndị na-eduga okpokoro dịka Finland ma ọ bụ Sweden, nwere 121 na 132 ụbọchị, n'otu n'otu"
Agbanyeghị, ọrụ biomass maka ọdịnihu nke European Union dị oke mkpa iji nwee ike nweta ebumnuche ike nke Brussels hibere maka afọ 2020.
Bioenergy ga-atụnye ụtụ na ọkara nke ihe mgbaru ọsọ ahụ na nke a EU ga-erute 20% nke mmepụta ume sitere na ume ọhụrụ.
Herrero na-akọwa na:
"Na 2014, bioenergy ruru 61% nke ume ọhụrụ niile agbara, nke ruru 10% nke oke oriri ike na Europe."
N'aka nke ọzọ, obi jụrụ na kpo oku na-anọchi anya ihe dịka 50% nke ike oriri zuru oke na European Union, nke a pụtara na bioenergy nke enwetara site na biomass bụ onye ndu n'etiti ume ọhụrụ maka iji ọkụ na 88% nke iji kpo oku na ịjụ oyi, na-eche na njedebe, 16% nke oke oriri ike Europe.
Ọganihu nke biomass na Spain
Na Spain, n'agbanyeghị agbanyeghị akụkụ dị ala nke tebụl ọkwa, afọ ole na ole ugbu a ọ na-arụ ọrụ mgbalị siri ike.
Mmụba ike nke biomass na-amụba n'ike n'ike na, ihe na-erughị afọ iri (n'agbata afọ 2008 na 2016) ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ ndị a raara nye biomass amụbawo site na ihe karịrị 10.000 ruo ihe karịrị 200.000, na nkezi nke 1.000 MWt (thermal megawatts).
N'otu aka ahụ, ụdị ume a nwere nnukwu ikike maka mmepe mba anyị n'ihi Owuwe ihe ubi na - enweghi nsogbu, na-enweghị ike igbunye hectare ndị ọzọ na-emepụta nanị biomass.
Dabere na data AVEBIOM, Spain nwere ihe dịka 30% nke biomass ọ na - ewepụta site na nhicha oke ọhịa Ọ bụ ezie na mba ndị dị ka Austria, Germany ma ọ bụ Sweden ndị a kpọtụrụ aha na-eri 60% nke ihe amịpụtara ma anyị chetara na Sweden nọ n'ọnọdụ mbụ yana ụbọchị 132 nke njiri onwe ya na, ka ọ dị ugbu a, Austria nwere ụbọchị 66 (7th ebe) na Germany Daysbọchị 38 (ebe 17).
Nke ahụ kwuru, ngalaba biomass dị na Spain na-eru nso 3.700 nde euro kwa afọ, na-anọchi anya 0,34% nke Gross Domestic Product (GDP) na nke na-arịwanye elu nwa oge.
N'ime afọ 15 gara aga, ike a na-agbanwe agbanwe esila na ya tinye 3,2% na 6% nke ike isi na-eri na mba anyị.
Na 2015, ọ mepụtara ihe karịrị 24.250 ọrụ na-enweghị isi, ọkara n'ime ha metụtara metụtara oke ọhịa (n'ọtụtụ ọnọdụ, ọhịa ndị a gbahapụrụ agbahapụ) na mmepụta nke biofuels.
Mmiri a na - agbanwe agbanwe na njikwa ya, Herrero na-agbakwụnye, na-eme ka o kwe omume ịlụ ọgụ nke ọma megide mmetụta griin haus na mgbanwe ihu igwe, ebe ọ bụ ọrụ na-anọpụ iche na nsị CO2.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Bayam » Biomass dị ka isi iyi nke ike Spanish
Castilla-La Mancha na-akwado ume ọhụrụ
Ugbo ala ikuku nke oke osimiri Iberdrola na Wikinger ejikọrọla grid